Dowladda oo ka hadashay dadkii loo qab qabtay Qaraxii Hotelka SYL – Radio Muqdisho
Ka dib howlo baaritaano ah oo ay wadeen Gudigii loo xilsaaray in ay baaris ku sameyaan cida ka dambeysay Qaraxii 22 biashii Janaayo ka dhacay Hotelka SYL Ee magaaladda Muqdisho ayaa maanta gudigaasi sheegey in ay ku guUlaysteen in ay helaan xogaha rasmiga ah ee ku saabsan shakhsiyaad ku lug lahaa qaraxaasi.
Dr Axmed Cali Abuukar ku xigeenka Xeer-ilaaliyaha Qaranka oo kamid ahaa gudiga loo xilsaaray baaritaanka arintan ayaa sheegay in 11 ruux oo lagu eedeyay in ay falkaasi ka dambeeyeen xabsiga dhexe loo gudbiyay isla markaana baaritaano lagu sameyn doono.
Ku xigeenka Xeer-ilaaliyaha qaranka ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xarunta Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed uu ku sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan Maxkamad loo soo taagi doono shakhsiyaadkii lagu helo in ay fududeeyeen qaraxiika dhacay Hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho.
“Dadka la qabtay waxaa ku jira saraakiil ,Waxaan aaminsanahaya in aan kiisaska arintan aad de dejinay maadaama arintan ay aheyd mid culeyskeeda leh waxaana loo gudbinayaa Maxkamadda ku shaqada leh” ayuu yiri Dr Axmed.
Dr Axmed ayaa sidoo kale sheegay in dadka hadda la qab qabtay ay yihiin oo kali ah tuhunsanayaal isla markaana ay kala saari doonoto Maxkamad.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in gudi ay u saartay oo baaritaano ku sameynaayo qaraxii 22-ka bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana laga dhursugayay natiijada baxda baaritaanada ay gudigu sameeyeen.